Firy ny backlinks tokony hanondro ny tranoko?
Ny fanontaniana hoe "Firy ny rohy mankany amin'ny tranokalako dia tokony hapetraka ao amin'ny tranonkala dizitaly". Henontsika izany farafahakeliny isan'andro isan'andro avy amin'ny mpanjifanay. Backlinks mila miankina mivantana amin'ny tanjon'ny orinasa ianao. Arakaraka ny tianao hotratrarina, ny backlinks maro kokoa ho anao dia mila. Raha miresaka momba ny zava-bita aho dia midika filaharana, teny manan-danja voatokana, nomerao isa, isan-jaton'ny fiovam-po sy ny sisa. Amin'izao androntsika izao, tsy manadino ireo adiresy an'arivony izay manondro ny tranokalanao ianao raha nanova ny algorithm ny Google, mametraka ny kalitaon'ny habetsahana. Mety manana andian-tsarimihetsika maromaro maromaro ho an'ny tranokalanao ianao avy amin'ny loharanom-pahefana maimaim-poana, ary ampy ho an'ny fikarohana karakarazara hametrahana ny tranokalanao ambony amin'ny SERP. Ary raha tsy izany dia mety manana backlinks maro tsy tambo isaina avy amin'ny sehatra spammy ambany ianao izay hampalahelo fotsiny ny toerana misy anao ary handrava ny ezaka SEO anao.
Ny isa maromaro amin'ny backlinks dia tsy mety ho 100% marina satria mety tsy miovaova amin'ny sehatry ny fandraharahana. Ohatra, ny orinasam-pandraharahana eo an-toerana dia mety hahazo ny loka manokana hanosehana amin'ny famolavolana lamin'asa 50, raha toa ka tsy manome vokatra hita maso ihany koa ny isan'ny backlinks ho an'ny orinasa lehibe. Miaraka amin'ny backlinks qualitative 50, mety ho azo antenaina ny handrasana pejy voalohan'ny pejy mihoatra ny telo amin'ny fifaninanana ambony.
Mba hahitana valiny marina ho an'ity fanontaniana ity, dia tsy mila mametraka taratra ianao. Raha tokony ho izany, tokony ho avy hatrany ary hanorina tsy tapaka ny rohy ivelany amin'ny fototra. Tokony hitondra ity dingana ity ho toy ny zavatra mitohy sy maharitra. Raha vantany vao mijanona ny rohy misy anao, dia manomboka manomboka ny fahefana sy ny lalao. Izany no antony tokony hanohizanao hitady fomba vaovao hahazoana rohy ivelany amin'ny tranokalanao.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny soso-kevitra sasantsasany izay mila dinihina rehefa mitady valiny marina momba ny fanontaniana "Firy ny bikana tokony hanondroina ny tranoko?"
ny isan'ny backlinks ilainao?
Ny isan'ny backlinks tokony hapetrakao dia miankina amin'ny fahaiza-mifanentana amin'ny teny fikarohana. Raha manana mpanamory fiaramanidina maro isaky ny iray amin'ireo sora-baventy ireo ny mpifaninana aminao, dia mila koa ianao hanangona ny sanda mety ho azonao hanamboarana ny isan'ny backlinks. Mila mikaroka ny tsenan'ny varotrao ianao ary jereo ny habetsaky ny rohy manondro ny pejy tsirairay izay miavaka amin'ny Google SERP. Mitantana io fikarohana io, tsy miraharaha ireo tranonkala amin'ny ankamaroan'ny rindranasa sy tranonkala miaraka amin'ny backlinks faran'izay kely indrindra. Ny salan'isa dia tokony hozaraina amin'ny 8. Ny tarehimarika farany azonao dia tsy ho marina raha tsy fantatrao ny hatsaran'ny rohy.
Araka ny algorithm Google amin'izao fotoana izao, tokony tsy tokony hampifantoka ny isa ny backlinks amin'ny lafiny manan-danja Ny fanorenana rohy dia ny kalitaon'ny ranom-boankazo manaraka. Amin'ny ankapobeny, misy laminy avo lenta avo lenta misy lamin'arivony mavesatra. Ny vahaolana tsara indrindra dia ny mahita ny volamena midika hoe kalitao sy ny habetsaky ny rohy ivelany.
Backlinks izay manondro ny tranokalanao dia tokony hanaraka ireo fepetra manokana:
mandefa fifamoivoizana voatokana;
dia ilaina sy ilaina;
nampidirina ao anaty votoaty tsara;
avy amin'ny loharano azo itokisana;
dia apetraka amin'ny pejy iray misy pejy PageRank avo;
dia tsy tokony hiovaova;
tsy mora azo Source .